Iimpawu zeGuemembranes ezizimeleyo
Iiprojekthi zokugcwaliswa komhlaba
Iiprojekthi zepetroli zerhasi
Itonela kunye neeprojekthi zendlela
Ukwakha kunye nophahla
Iiprojekthi zeDama kunye neLake
Umboniso wezoRhwebo udala amanye amathuba
I-12th International Exhibition and Decoration Materials Expo ebibanjelwe eKunming, eYunnan ukusukela ngomhla wama-29 ukuya kowama-31 kuJulayi, ngo-2021. Umboniso wahlulwe waba yiholo lobuchwephesha bamanzi edolophini, iholo yamandla aluhlaza, iholo yezinto eziphathekayo ezingenayo amanzi, ukwakha iholo lenzululwazi nobuchwephesha, iingcango .. .
UKWAKHIWA KWEENKQUBO ZOKUCHASANA NOKUSETYENZISWA KWENKQUBO YEPHOSPHOGYPSUM
Ngophuhliso olukhawulezileyo lwamashishini, ungcoliseko kunye nokwenzakala kwendalo kuya kusiba kubi ngakumbi. Iingxaki zokusingqongileyo njengokukhutshwa kwegesi yendlu eluhlaza, ungcoliseko lwamanzi kunye nesinyithi esinzima kakhulu somhlaba ziingxaki eziqhelekileyo zokusingqongileyo ezijongene nehlabathi. Es ...
I-Cheng Du Grain Group Co., Ltd yokugcina indawo yokugcina amanzi.
Ukhuseleko lokutya sisiseko sophuhliso loqoqosho. Ukugcinwa kweenkozo kuneemfuno eziphakamileyo kakhulu kubungqina bokufuma kunye nobungqina bokuvuza kwendawo yokugcina. Iikhoyili ze-asphalt zemveli ze-SBS zineengozi ezinkulu zomlilo ngexesha lenkqubo yokwakha. Ulwakhiwo lwe ...
Umthengisi weMathiriyeli engenaManzi yeCheng Du 2021 yeFISU yeYunivesithi yeHlabathi yeMidlalo
I-31st Universiade izakubanjwa nge-18 ka-Agasti 2021 e-Chengdu, idolophu yeepandas. UTrump Eco Technology Co., Ltd. yinkampani yendawo eChengdu. Isekwe kumzi mveliso wokungena manzi ngaphezulu kweminyaka engama-35. Ngomgangatho wayo obalaseleyo kunye nenkonzo egqwesileyo, iphumelele ukuqondwa kunye nokuthenjwa ...
Ubungakanani beemarike ze-polyethylene ezixineneyo zikhula ekupheleni kwe-2026
Imakethi yeHDPE yehlabathi yaxabiswa nge-US $ 63.5 yezigidigidi ngo-2017 kwaye kulindeleke ukuba ifike kwi-US $ 87.5 yezigidigidi ngo-2026, ngomgangatho wokukhula ngonyaka odibeneyo omalunga ne-4.32% ngexesha lokuqikelela. Ubuninzi be-polyethylene (HDPE) yipolymer ye-thermoplastic eyenziwe kwi-monomer ethylene eyenziwe nge-nat ...
Ubuninzi be-polyethylene (HDPE) yeemarike zembonakalo yentengiso, izinto zophuhliso, amathuba amatsha kunye noqikelelo 2027 | Ukubanjwa kweGSE, AGRU, Solmax, JUTA
I-Los Angeles, e-USA: Ingxelo yeNtengiso yeGlobal High Density Polyethylene (HDPE) yeGeomembrane Market inikezela ngobukrelekrele obugqwesileyo obenza ukuba abathathi-nxaxheba kwimakethi bakhuphisane kakuhle nabakhuphisana nabo abanzima ngokusekwe ekukhuleni, kwintengiso nakwezinye izinto ezibalulekileyo. Ukongeza kwiinguqulelo zentengiso eziphambili (kubandakanya ...
Ngo-2026, intengiso yezinto ezibonakalayo ze-geosynthetic iya kufikelela kwi-US $ 45.25 yezigidigidi; Ukusetyenziswa okukhulu kwezinto ezizinzileyo zokwakha ukukhuthaza ukukhula: I-Fortune Business Insight ™
Nge-Epreli 2, 2020, ePune (GLOBE NEWSWIRE) -Izinga lemarike yezinto zokwenziwa komhlaba ziya kufumana ingqalelo ngenxa yokwanda kokusetyenziswa kwezixhobo zokwakha ezizinzileyo. Inkqubo yomhlaba iyacutha ukusetyenziswa kwemathiriyeli yendalo (enje ngokudibeneyo kunye nesanti), ngokwenza njalo kube lula ukwenziwa kwento yokwenza ...
Ukusetyenziswa kweDaelim HDPE Geomembrane kungakhokelela kwimigodi enemveliso ngakumbi. Iinkqubo ezintsha ezibandakanya imfumba ye-leach indlela yokutsalwa kwentsimbi exabisekileyo kusetyenziswa izisombululo zeekhemikhali zikhokelele ekutsalweni kweendleko eziphantsi ukusuka kwizinga eliphantsi le-ores. Ukusetyenziswa kwezinto eziguqukayo zeDaelim Geomembrane liners kuthintela ukungqinelana ...
Iifama zeetanki zifakwe ngaphakathi ukuthintela ungcoliseko lwamanzi omhlaba kwimeko yokuchitheka kweekhemikhali. Inkqubo yesixokelelwano sokugcina inokubekwa kwikhonkrithi okanye ngqo emhlabeni. Ezi nkqubo ze-liner zesikhongozeli sesibini zinokuphucuka kakhulu zisebenzisa izihlomelo ezicacileyo kwitanki kunye ...
IiHPEPE Geomembranes zisetyenziselwa ukufakela inkunkuma ukuthintela ukuhamba kolwelo, ngaloo ndlela kuncitshiswa okanye kupheliswe ukuveliswa kwenkunkuma emva kokugcwaliswa komhlaba. Ikepusi ikwenzelwe ukubamba kwaye ikhuphe ngokufanelekileyo iigesi ezenziwe ngexesha lokubola kwenkunkuma. Enye intengiso ...
Injongo ephambili ye-HDPE Geomembrane liner kwindawo yokulahla inkunkuma kukukhusela amanzi aphantsi komhlaba angangcoliseki. I-Daelim HDPE Geomembranes ziyamelana nenkunkuma eninzi kwaye zigqitha kwiimfuno zokungafezeki. Indawo yokulahla inkunkuma enobungozi ifuna ii-liners kabini kunye nokuqokelelwa kwetyhefu / i-remo ...
Ukusukela ngeminyaka yoo-1950, iinjineli ziye zayila ngempumelelo ngeejomembranes. Ukusetyenziswa kweegeomembranes, okwabizwa ngokuba zii-membrane liners (FMLs), kunyukile ngenxa yenkxalabo ekhulayo malunga nongcoliseko lwezixhobo zamanzi ezixabisekileyo. Imitya yelinen yemveli, njengekhonkrithi, i-admi ...
I-Trump Eco Technology Co, Ltd.yinkampani enkulu ebandakanyeka kuphando, kwimveliso nakwintengiso ye-geosynthetics kunye ne-macromolecule yezixhobo ezingangeni manzi.
Idilesi: Hayi. 32, ukukhutshwa kwesakhiwo seofisi, iJinke Road, iSithili saseJinniu, iChengdu, China 610036